अमेजनमा कसरी काम गर्ने गठन र अध्ययन
अमेजनमा कसरी काम गर्ने
मारिया जोस रोल्डन | 11/06/2021 12:00 | काम बन्द गर्नुहोस्
निस्सन्देह अमेजन विश्वको सब भन्दा महत्वपूर्ण कम्पनिहरु मध्ये एक हो। यसको पृष्ठ मार्फत लाखौं व्यक्तिले हरेक दिन सबै प्रकारका खरीदहरू गर्छन्, कम्पनीका लागि अतुलनीय मुनाफा उत्पादन गर्दै। यो सबै सम्भव छैन ठूलो व्यवसाय संग यो व्यवसाय विशाल छ कि संग।
मुख्य मुख्यालय सिएटल राज्य मा छन् र आज जो मानिस अमेजन मार्फत कुनै प्रकारको खरीद गरेका छैन दुर्लभ छ। धेरै व्यक्तिहरू यस्तो सोच्दछन् कि यस्तो कम्पनी बनाउने ठूलो स्टाफको भाग हुन लगभग असम्भव छ, यद्यपि अमेजन लगातार चालमा रहेको छ र नयाँ कर्मचारीहरू आफ्नो स्टाफमा समावेश गर्दछ।
अर्को लेखमा हामी तपाईंलाई एमेजोन र यसको लागि के आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
1 अमेजनमा काम गर्नुको मतलब के हो
2 अमेजनमा कसरी काम गर्ने?
अमेजनमा काम गर्नुको मतलब के हो
जब यो अमेजनमा बिभिन्न रोजगार प्रस्तावहरू विश्लेषण गर्न आउँदछ, यो ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ तिनीहरू धेरै फरक छन् भन्ने तथ्यलाई बाहेक अरू पनि छन्। यो किनभने रसद नेटवर्क एकदम व्यापक छ, मुख्यालय स्पेनीको इलाकामा फैलियो।
कर्मचारीहरुको तलब को सम्बन्ध मा, यो यो क्षेत्र मा उच्च को एक हो भन्न पर्छ। आधारभूत तलब बाहेक, कामदारहरूले प्रायः पूरक पारिश्रमिक पाउँछन् जुन पेन्सन योजना जस्तो हुन सक्छ। यस बाहेक, कम्पनीले सबै खर्च वहन गर्दछ यदि श्रमिकहरूले श्रमशक्ति भित्र बढावा दिन धेरै प्रशिक्षण दिन चाहन्छन।
यस कम्पनीको अंश बन्नको बारे राम्रो र सकारात्मक कुरा भनेको तथ्य यो छ कि इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य निरन्तर बढ्दै छ र दिन प्रतिदिन झन् बढ्दै गइरहेको छ। तसर्थ, अमेजन एक कम्पनी हो कि केही समय र धेरै वर्षको लागि Sane रहन्छ। त्यसकारण, यस कम्पनीमा काम गर्नु भनेको मध्यम र दीर्घ अवधिमा काम सुरक्षित गर्नु हो, केहि जुन हामीले चालु वर्षहरूमा महत्वपूर्ण छ।
अमेजनमा कसरी काम गर्ने?
यदि तपाईं यस विशाल कम्पनीको अंश बन्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसको आधिकारिक पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ तपाईं रोजगार प्रस्ताव र सबै प्रकारको नयाँ रिक्तियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। सामान्य कुरा के हो भने बाह्य कम्पनीहरूले अमेजन कार्यबलमा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीहरूको छनौट गर्ने काममा छन्। माग गरिएका आवश्यकताहरूको सन्दर्भमा निम्न छन्:
वैध कार्य अनुमति र खाली ठाउँमा प्रस्ताव गरिएको देशमा बस्नुहोस्।
प्रश्नमा भाषामा प्रवीणता र ठाउँ लिन्छ जहाँ काम लिन्छ।
केहि रोजगारका लागि ड्राइभर इजाजतपत्र आवश्यक पर्दछ एक वाहनको स्वामित्वको साथ।
Eन्यूनतम उमेर १ years बर्ष।
सिक्ने इच्छा र सकारात्मक दृष्टिकोण
उचाइमा काम गर्ने क्षमता, विशेष गरी यदि रोजगार प्रस्तावले रसद पक्षलाई जनाउँछ। यी अवस्थाहरूमा यो पनि आवश्यक छ कि व्यक्तिले कुनै समस्या बिना १० किलोभन्दा बढी भारहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
यो पनि प्राय जसो एक आवश्यकताको रूपमा आवश्यक हुन्छ, यो व्यक्तिलाई कुनै समस्या हुँदैन जब यो रातमा काम गर्ने आउँदछ।
पारिश्रमिकको बारेमा वा के अमेजनका कर्मचारीले शुल्क लिन्छन्, यो संकेत गर्नुपर्दछ कि तलब व्यक्तिमा रहेको काम अनुसार फरक हुन्छ। डिलिभरी पुरुषहरूको मामलामा, यो अनुमान गरिएको छ कि तिनीहरू प्रति महिना १,२०० यूरो लिन्छन्। रसदमा वा गोदाममा काम गर्ने मामलामा, तलब प्रति महिना १1.600०० युरो हुन्छ। यस तरिकाले, एक अमेजन डेलिभरी व्यक्तिको वार्षिक तलब प्रति वर्ष १०,००० युरो हुन्छ र गोदाम पोर्टरको मामलामा तलब प्रति वर्ष २०,००० युरो हुन्छ।
अन्तमा, अमेजन एक लगातार वृद्धि भइरहेको कम्पनी हो जसले वर्षभरि धेरै रोजगार सिर्जना गर्दछ। यो भन्ने बिना नै जान्छ कि हामी संसारमा सब भन्दा महत्वपूर्ण कम्पनीहरु को सामना गरिरहेका छौं। तपाईंले देख्नुभए जस्तो, कार्यबलमा प्रवेश गर्नका लागि आवश्यकताहरू पनि त्यति मागका छैनन्। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईले अमेजन वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र बिभिन्न काम प्रस्तावहरू खोज्नु पर्छ। त्यहाँबाट, व्यक्ति कार्य स्थान वा उनीहरूले प्रस्ताव गरेको स्थान द्वारा खोजी गर्न सक्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » अमेजनमा कसरी काम गर्ने
कसरी घर जग्गा एजेन्ट हुन: helpful सहयोगी सल्लाहहरू
कार्यक्रम परिचारिकाको रूपमा कामका लागि for सल्लाहहरू